नविल बैंकको संचालक समितिले अनिल शाहलार्इ सिइओ बनाउने निर्णय, शशिन 'आउट', शाह 'इन' को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)
Purn Ghimire[ 2018-01-13 07:59:33 ]
Naya samachar Lekhana tira Lagnu hola. Anil shahalai Agadi bata hataunu hola.
हालसम्म ७१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।
Milan Rana[ 2017-12-28 09:40:18 ]
अब नबिलको हालत पनि मेघा हुने भयो । आखिर हरेकको डाउनफल आउने नै रैछ । संसारको नियमनै यस्तै रहेछ । कारक बन्न आएका अनिल लाई शुभकामना ।
हालसम्म १९५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।